सलमान खानको ‘किक टु’ को निर्देशन गर्नेछन् रोहित शेट्टी ?
बलिउड निर्देशक रोहित शेट्टी र सलमान खान कुनै फिल्ममा काम गर्ने खबर केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो । भारतको प्रोमोशनको क्रममा सलमानले रोहितसँग एउटा प्रोजेक्टमा कुरा भइरहेको बताउँदै सबै कुरा मिले चाँडै नै यसबारे मिडियालाई जानकारी दिने बताएका थिए ।
भारतीय मिडियाले केही स्रोतलाई हवाला दिँदै लगभग १ वर्षसम्म ‘किक टु’ को स्क्रिप्टमा काम गरेपछि निर्माता साजिद नाडियाडवालाले यसलाई फाइनल गरेको जानकारी दिएको छ । उक्त फिल्ममा एक पटक पुनः सलमान खान र ज्याकलिन फर्नान्डिसको जोडी हुने बताइएको छ भने फिल्मको निर्देशनका लागि रोहित शेट्टीलाई अप्रोच गरिएको छ ।
रिपोर्टमा यो पनि भनिएको छ कि रोहित आफैंसँग पनि फिल्मको स्क्रिप्ट छ जसमा उनी सलमानको अभिनय चाहन्छन् । यदि किक टु निर्देशनमा सहमती बन्न नसकेको अवस्थामा कुनै अन्य फिल्ममा पनि यी दुई काम गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको भारतीय मिडियाले जानकारी दिएको छ ।
टिकटकको कारण अभिनेता एजाज खान पक्राउ
सोनाक्षी सिंहाको त्यो ‘राज’ जसको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन
कमेडियन कपिल शर्माको घरमा भीषण आगलागी !
‘सोच’ को टिजर रिलिज,फिल्म चाहिँ २० भदौमा
नेपाल लोक स्टारबाट भाईरल भएका मधुसुदन मिडियामा, कसरी बने हासोको पात्र रु यस्तो छ कहानी भिडियो सहित